fanontaniana fiaramanidina tolo-kevitra
1 taona 11 volana lasa izay - 1 taona 11 volana lasa izay #292 by JanneAir15
Salama! Manana fanontaniana indray. Tiako ny Airbus A380 fa misy maro amin'izy ireo (payware sy ny freeware). Tiako ho fantatra hoe iza no tokony hahazo. Tsy maninona no payware na freeware raha mbola izany tsara.
Ary raha manana olana koa ny misafidy ny tsara ho anao fiaramanidina dia mandefa ny fanontaniana eto!
I Efa nahita olona izay eo amin'ity pejy ity. Fa Izaho kosa mbola manana fanontaniana iray momba ny fiaramanidina. Afaka manampy liveries izany fomba amam-panao?
Last edit: 1 taona 11 volana lasa izay JanneAir15.
1 taona 11 volana lasa izay #293 by Dariussssss
Ihany koa aho mampiasa ny iray, ary tsy amin'ny rehetra. Niezaka aho ny hametraka bebe kokoa liveries, fa noho ny antony, dia tsy miasa ... Angamba aho amin'ny zavatra ratsy.
1 taona 11 volana lasa izay #330 by Gh0stRider203
Dariussssss nanoratra hoe: koa aho mampiasa ny iray, ary tsy amin'ny rehetra. Niezaka aho ny hametraka bebe kokoa liveries, fa noho ny antony, dia tsy miasa ... Angamba aho amin'ny zavatra ratsy.
no manova ny aircraft.cfg rakitra ihany koa?
1 taona 11 volana lasa izay #332 by Dariussssss
Nataoko, fa mbola, ny nametraka fanamian'ny tsy mampiseho ny ... Tsy fantatro ny antony.
1 taona 11 volana lasa izay #334 by JanneAir15
Heveriko fa fantatro ny antony. Izany fiaramanidina no am-boalohany ho an'ny FS9. No mahazo ny tsara fanamian'ny fa fiaramanidina? Nojereko ny tetikasa Airbus pejy ary misy A380 ho an'ny FS9 (izany fiaramanidina toy ny eto amin'ity pejy ity fa ny farany ho an'ny FSX) ka tsy azoko antoka inona no tsy maintsy atao mba hahazoana ny liveries miasa araka ny tokony ho. Koa hiezaka aho ny hanao zavatra mba hahazoana liveries miasa ary avy eo lazao eto.
1 taona 11 volana lasa izay #338 by Dariussssss
Miandrandra ny azy. Same eto, dia andramo indray.
1 taona 11 volana lasa izay #339 by Dariussssss
Noho izany, any no manana izany. Afaka hametraka ny fanamian'ny an '' ny '' A380 ary miasa.
Ny fomba atao dia izany ... Voalohany, karohy ary maka ihany ny A380 mihasimba tianao ny hametraka. Afaka mahita betsaka ny azy tany Avsim. Ataovy ny mihasimba fampirimana an-PA A380 fampirimana, misokatra sy Ovay fiaramanidina .cfg rakitra. Aoka ho azo antoka mba hanamarinana fa mihasimba dia mifanaraka amin'ny SIM, amin'ity tranga ity, ny FSX.
1 taona 11 volana lasa izay #342 by JanneAir15
Ok, misaotra hanandrana izany aho.
1 taona 11 volana lasa izay #343 by Gh0stRider203
JanneAir15 nanoratra hoe: Mino aho fa fantatro ny antony. Izany fiaramanidina no am-boalohany ho an'ny FS9. No mahazo ny tsara fanamian'ny fa fiaramanidina? Nojereko ny tetikasa Airbus pejy ary misy A380 ho an'ny FS9 (izany fiaramanidina toy ny eto amin'ity pejy ity fa ny farany ho an'ny FSX) ka tsy azoko antoka inona no tsy maintsy atao mba hahazoana ny liveries miasa araka ny tokony ho. Koa hiezaka aho ny hanao zavatra mba hahazoana liveries miasa ary avy eo lazao eto.
trondro tsara! Tsy mieritreritra izay LOL
Fotoana mamorona pejy: 0.388 segondra